Back You are here: Home फिचर सहारा वृद्धाश्रम
‘बुबा आमालाई पाल्ने र भाइ बहिनीलाई हुर्काउने गर्दैमा जीवन गयो । आफ्नो लागि केही गर्न सकिएन । सबैको प्रगति, उन्नति भएको छ । मेरो आफ्नो भन्नु कोही भएन’ देवघाटको वृद्धाश्रममा नौ वर्षदेखि बस्दै आएका ८५ वर्षीय मोतीलाल जोशीले आफ्नो गुनासो पोखे ।
जीवनको उतराद्र्धमा आएर देवघाटको वृद्धाश्रमलाई अन्तिम स्थान बनाएकामध्ये गोरखा बुङ्कोट वडा नम्बर तीनमा जन्मिएका जोशीको जीवनमा धेरै उतारचढाव आएको छ । आफ्नो लागि भन्दा परिवारको लागि धेरै गर्नु पर्छ भन्ने सोचाई राखेका उनले सेवामा सारा जीवन बिताए । परिवारका सदस्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्दै जीवनका उर्जाशील समय बिताएका उनी अहिले वृद्धाश्रममा आएर बसेका छन् ।
पाँच दाजुभाइ र एक बहिनीमध्ये दोस्रो सन्तानका रुपमा जन्मिएका उनले आमा, बुबा र भाइबहिनीको लालनपालनको जिम्मा लिए । गाउँ घरमा ज्यालाबनी गर्दै परिवारको खानपिनको जोहो गर्दै आएका उनले ३५ वर्षको उमेरमा विवाह गरे । ‘मेरा दाजु, भाइ, बहिनी सबैको विवाह भएपछि मेरो विवाह भएको थियो’ जोशीले भने, ‘आमा, बुबाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो । भाइ, बहिनीको लालनपालन गर्दैमा उमेर गएछ ।’
सबैको घरजम भएपछि विवाह गरेपनि उनको जीवनमा भने खुसीयाली आउन सकेन । हरेक सुख दुःखमा साथ दिने उनकी जीवन संगीनीले विवाह भएको पाँच वर्ष नपुग्दै संसार छाडेर गइन् । खाना पकाएर सबैलाई खुवाएर बसेकी उनी एक्कासी पिँढीमा लडेर मरेको जोशीले बताए ।
‘आफ्नो भन्नु उनी नै थिइन्, आँखै अगाडि मेरर गएपछि मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो’ उनले भने, ‘चालीस वर्षको उमेरमा उनले छाडेर गएपछि अर्को विवाह गर्ने विचार आएन । दाजु, भाइ, बहिनी सबैको घरबार भयो । म एक्लै भएँ, अनि आफ्नो जीवन पाल्न अरुको काम गर्दै हिँड्न थालेँ ।’
‘आफ्नो भन्नु सम्पत्ति केही नभएपछि भारी बोक्ने, घाँस काट्ने, दाउरा बोक्ने गरेर दिन कटाएँ’ उनले भने, ‘दाजुभाइको प्रगतिको लागि मैले धेरै गरेँ । सबैको उन्नति भयो । मेरो यो अवस्थामा कसैले हेरेनन् ।’ आफूलाई आफन्तले वास्ता नगरेपनि उनलाई गुनासो छैन । बुबाआमाको हेरविचार गरेर सद्गति गराएकोमा सुखी छन् ।
‘सबैको उन्नति भएको छ । मलाई त्यसैमा खुसी छ’ जोशीले भने, ‘एउटी बहिनी जुटपानीमा छिन् । कहिलेकाहीँ भेट्न आउँछिन् । त्यसैमा खुसी छु । अरुको घाँसदाउरा गर्दागर्दै पचहत्तर वर्ष काटिएछ । एउटा चिनजान भएका व्यक्तिले हामीजस्तो कोही नभएकाहरु बस्ने ठाउँ देवघाटमा छ भन्ने सुनेपछि आएको हो । हामीजस्ता कोही नभएकालाई राख्ने ठाउँ बनाएको रहेछ, खुसी छु ।’
‘अब मलाई केही गुनासो छैन’ जोशीले भने, ‘भजन भन्दाभन्दै संसार छाड्न पाए आनन्द आउँथ्यो । बाँचुन्जेल यो तेरो यो मेरो भनेपनि आखिर यही देवघाटमा आउनु पर्छ । धन सम्पत्तिले के गर्छ ? मलाई अब केही पीर छैन ।’
आफन्तहरु नभएका र भएर पनि संगै बस्ने वातावरण नभएका वृद्ध नागरिक देवघाटको वृद्धाश्रममा आएर बसेका छन् । आफ्नो धन सम्पत्ति भएर पनि बुढेसकालमा काम नलागेको र सम्पत्ति उपयोग गर्नबाट वन्चित पारेपछि उनीहरुको सहारा वृद्धाश्रम बन्ने गरेको छ ।
आश्रममा आएकामध्ये संन्यासी जीवन अपनाएकी ८० वर्षीया निर्मला गिरीलाई आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्नबाट आफन्तले नै बन्चित बनाएपछि उनको सहारा वृद्धाश्रम बनेको छ । दाङ, देउखुरी घर भएकी उनको नौ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । दुई वटी छोरी र एउटा छोरालाई जन्म दिएकी उनी २७ वर्षको उमेर हुँदा बिधुवा भइन् । श्रीमान नभएपनि सन्तानले बुढेसकालमा हेर्लान् भन्दै आशा गरी शिक्षादिक्षा दिएर हुर्काएको सन्तानबाट सुःख पाउन सकिनन् ।
‘छोराछोरीको विवाह गरेर घरजम भएपछि आफूले सुःख पाइन्छ भन्ने लागेको थियो, सबै सपना रहेछ’ गिरीले भनिन्, ‘बाह्र छोरा तेह्र नाति बुढाको धोक्रो काँधै माथि भनेको यही हो । आफ्नो बल र पहुँच हुँदैमा गुल्मीको रिडीमा चारकोठे धर्मशाला बनाएँ । त्यहाँ अहिले विद्यार्थी बस्दै आएका छन् । जन्मेपछि धर्मकर्म गर्नु पर्छ, पछि सुख पाइन्छ भनेर छोरा हँुदैमा धर्मशाला बनाएँ । अहिले आएर आफै धर्मशालामा आएर बस्नु परेको छ ।’
‘छोराको विवाह भएपछि बुहारीले छुट्टिएर बसौँ भन्दै मसंग बस्न मानिनन् । छोराको करले बसेँ । उनी पनि जिब्रोको क्यान्सर भएर बिते । छोरा नभएपछि म त्यहाँ बस्न सकिन’ आफ्नो व्यथा सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘आफैले बनाएको धर्मशालामा केही वर्ष बसेँ । नातिहरुले म मरेपछि किरिया नबस्ने भन्दै पार्टीमा लागे । आमा, बुबा, हजुरआमा मर्दा पनि किरिया बस्न नहुने कस्तो पार्टी रहेछ ।’
‘नातिहरु पार्टीमा लागेपछि त म त्यहाँ बस्न नसक्ने भएँ’ गिरीले भनिन्, ‘वचनको वाण सहन साह्रै गाह्रो हुँदोरहेछ । घामपानी नभनी सारा दुःख सहेर हुर्काएको सन्तानले सहन नसकेपछि कहाँ जाने ? घरभरी सन्तान, गाउँभरी आफन्त, कागजमा सम्पत्ति भएर आफूले सुख पाइँदो रहेनछ ।’
‘सबैलाई बुढेसकाल लाग्छ । सधैँ बल, बैंस हँुदैन भन्ने बुझ्दैनन् । त्यही भएर यो अवस्थामा ल्याउने गर्दछन्’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना सन्तानका वरपर बस्न र उनीहरुको सुखमा रमाउन हामीलाई पनि मन थियो तर भाग्यले यहीँ बस्न लेखेको रहेछ, आइयो ।’
१५ वर्ष रिडीमा बसेर देवघाटको वृद्धाश्रममा आएकी उनी यहीँ रमाएकी छिन् । छोरा, बुहारीले बस्न नदिएपछि छोरीको सहारा लिन मानिनन् । ‘छोरीको घर गएर बस्न हँुदैन, पाप लाग्छ । धर्मकर्मको पनि ख्याल राख्नु पर्दछ’ उनले भनिन्, ‘छोरीले अहिलेपनि हामीसंगै बसौं भनेकी छिन् । त्यहाँ बस्दा आइपर्ने असजिलो झल्झली आँखामा आउँछ । त्यही भएर यहाँ बसेकी छु ।’
‘छोरीको मानो खाएर बस्नुभन्दा सरकारको मानो खान आनन्द आउँछ’ आफ्नो तर्क राख्दै उनले भनिन्, ‘आफ्ना आमा, बुबालाई बोझ सम्झने सन्तानहरुलाई पनि वृद्धाश्रममा कहिल्यै आउन नपरोस् । हामीले त यो अवस्था भोग्यौं, तिनीहरुले भोग्न नपरोस् ।’
तनहुँको देवघाटस्थित वृद्धाश्रम, रोटरी करुणालय लगायतमा गरी दुई सय जना वृद्धवृद्धा आश्रममा बस्दै आएका छन् । आफन्त नभएका र भएर पनि घरपरिवारमा बस्न नसकेकाहरु आश्रममा बस्ने गरेका छन् । विभिन्न कारणले यहाँ आइपुगेकाहरुको खानपिनको व्यवस्था विभिन्न सहयोगी संस्थाहरुबाट हँुदै आएको आश्रमका सहयोगीहरुले बताएका छन् । जन्मदिनको दिन, कुनै पर्व, विवाह उत्सव लगायतका पर्वहरुमा आश्रमका बुबा, आमालाई खुवाउन चाहनेहरुको सहयोग, आफ्ना आमा, बुबाको तिथीमा खुवाउनेहरुको सहयोगबाट आश्रम चलेको छ ।
देवघाटमा विभिन्न समयमा लाग्ने मेला उत्सव तथा पर्वमा पनि वृद्धवृद्धाहरु आउने क्रम रहेको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र पियाले बताए । अहिले देवघाटमा चलेको करोड बत्ती बाल्ने कार्यक्रमको अवसर पारेर आफ्ना सन्तानले आमाबुबालाई यहीँ ल्याएर छाड्ने गरेको र यसले गर्दा नयाँ सामाजिक समस्या सिर्जना भएको सामाजिक अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।